Diyo post :: केपी ओली र अर्थमन्त्रीले हामीसँग झूट बोल्नुभयो : वर्षमान पुन अनन्त
केपी ओली र अर्थमन्त्रीले हामीसँग झूट बोल्नुभयो : वर्षमान पुन अनन्त - Diyo post
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तनको बहसले नेपाली राजनीति फेरी तरंगित छ । प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले आफूसँग भएका सम्झौताहरु वर्तमान प्रधानमन्त्रीले लागु नगरेको आरोप लगाइरहेको छ । सोमबार बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको गर्न प्रचण्डलाई जिम्मेवारी दिएको छ । राष्ट्रिय सरकार बनाउनु पर्ने बहसको अग्रविन्दुमा माओवादी केन्द्रकै नेता वर्षमान पुन ‘अनन्त’ रहेका छन् । प्रस्तुत छ, वर्षमान पुन अनन्तसँग दियाेपाेस्टले गरेकाे कुराकानी :
राष्ट्रिय सरकारको बहस के हुँदैछ ?
हाम्रो पार्टीको पोलीटव्युरो बैठकले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय सरकार एजेन्डामा आधारित हुन्छ ।
शान्ति प्रक्रियाका तीनवटा कामहरु थिए । राजनीतिक काम थियो – संविधानसभा मार्फत राजनीतिक एजेन्डाहरुलाई अधिकतम सम्बोधन गर्ने त्यो गरियो यद्धपी केही रिजर्भेसनहरु छन्। तर मूल रुपमा सम्बोधन भएको छ । दोस्रो–सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापनको काम सम्पन्न भयो ।
तेस्रो महत्वपुर्ण काम भनेको संक्रमणकालीन न्याय समाधान गर्नु हो । जनयुद्धका सहिद, बेपत्ता परिवार, घाईते, अपाङ्गता भएकाहरुलाई, राहत दिने, न्याय दिने, खोजी गर्ने काम बाँकी छ । यो संक्रमणकालिन न्याय पनि हो । त्यसको लागि राष्ट्रिय सरकार चाहीएको हो ।
त्यसैगरी संविधान जारी भएको छ । यसले तिनवटा निर्वाचन १८ महिनामा गर्नेछ । कम्तीमा पनि २०० वटा कानुन नयाँ बनाउनुपर्छ र सयौँ कानुनहरु परिमार्जन र संशोधन तिब्रतामा लान पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार चाहीँन्छ ।
मधेसी, जनजाति लगायतका समुदायहरु संविधानमा आफनो केही असन्तुष्टिहरु राखेर आन्दोलनमा छन् । उनलाई संवाद र सहमतिमा ल्याउन सहमति नै चाहीँन्छ ।
भुकम्पपिडित आजपनि पालमूनि छन् । तीनलाई राहत दिन, पुनःनिर्माण गर्न, तिनका घर निर्माण गर्न, भत्किएका सम्पदाहरु निर्माण गर्न तीब्र गतिमा सहमतिका साथ राष्ट्रिय अभियान चलाउन जरुरी छ । र यति कुरा गरिसकेपछि राष्ट्रिय माहोल बन्छ । अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय निर्माणको माहोल बन्छ । त्यसका लागि कम्तिमा मुख्य तीन पार्टी–माओवादी, कांग्रेस र एमालेबीच सहमति अनिवार्य छ । अन्य आवश्यक शक्तिलाई पनि लिएर सहमति बनाएर अगाडी जान जरुरी छ ।
एमाले एक्लै अगाडी बढ्न चाहान्छ ।
एमालेसँग मिलेर चुनावहरुमा भाग लिने लगायतका सम्झौता भएको थियो ।
केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन, घान थापिराख्न, जस्तासुकै अवस्थामा बसिराख्न हामीले भोट मागेका होईनौं । हामीले उहाँँहरुलाई काँध थापेर त्यहाँ पुर्‍यायौँ । अनि आज हामीलाई नै हेप्ने खालको, होच्याउने खालको, भएको छ त्यो सहन सकिँदैन राजनीतिक, संवैधानिक नियुक्तीहरुमा योग्य मान्छेहरुलाई पाखा लगाइयो । यसमा गठबन्धनका भाव भन्दा सबैमा एमालेकरण गरियो । हाम्रा मन्त्रीहरुका मातहतका मन्त्रालयमा नियुक्ती गर्दा कित एमालेको मान्छे हुनुपर्ने वा ढिलाई गर्दिने वा कामै गर्न नदिने वातावरण बनेको छ ।
तपाईंले भन्दै गरेको यो एजेन्डालाई एमालेले अस्विकार गरेको हो ?
एमालेको पोजिशन अन्तर्विराेधी छ । राष्ट्रिय सहमति भन्छ तर, सहमतिको प्रयत्न गर्दैन । हामीले उठाएका एजेन्डा ठिकै हो भन्छ, तर संवाद चाहन्न । अरु शक्तिहरुसँग पनि संवाद चाहन्न । उ एक्लै अगाडी बढ्न खोजीरहेछ । प्रधानमन्त्रीको बेलाबेला बोली सुन्दा मानौ उहाँ पाँच बर्षे दुई तिहाईको सरकार जस्तोे व्यवहार छ ।
उहाँ अल्पमतको दोस्रो पार्टीको सरकारमा हुनुहुन्छ । केही पार्टीले समर्थन गरेको छ । जो उहाँँको पार्टीका मान्छे होईनन् । फरक–फरक बीचार, सिद्धान्त बोकेको पार्टीहरुले समर्थन गया छ । त्यो उहाँले बिर्सिनुहुन्छ । गठबन्धन सरकारको नीति, भावना अनुसार उहाँ चल्नु हुन्न । आफ्नो पार्टी हित मात्रै हेरेको जस्तो देखिन्छ । यसकारण राष्ट्रिय सहमति बनाउन, अहिलेका राष्ट्रिय एजेन्डा सम्बोधन गर्न केपी ओली जी तदारुक नदेखिएको, गम्भीर नदेखिएको हामीले महशुस गरेका छाैँ।
भनेपछि अब एमाले र माओवादीबीचको सम्बन्धको भविष्य कस्तो हुन्छ ?
सम्बन्ध भनेको एजेन्डा आधारित हुन्छ । माओवादीको आफ्नो इडियोलोजी छ । उहाँको आफ्नो बीचार राजनीति छ । हामी हाम्रो बीचार राजनीतिमा छौँँ । उहाँँहरुले एउटा निश्चित नीति कार्यक्रमलाई भोट माग्नुभएको छ । हामीले हाम्रो निश्चीत कार्यनीतिलाई भोट मागेका छौँँ । केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन, घान थापिराख्न, जस्तासुकै अवस्थामा बसिराख्न हामीलाई भोट मागेका होईनौं । त्यसैगरी उहाँँहरुले पनि हामीसँगै बस्नुपर्छ भनेर भोट माग्नु भएको होईन ।
सम्बन्धहरु स्वतन्त्र र एकअर्कासँग सम्मानजनक हुन्छन् । अहिले चाहीँ हामी बजेट पास गर्छौं । इमान्दारीता पूर्वक त्यसलाई समर्थन गर्छौं । त्यसपछि संवाद हुन्छ ।
तीनबुँदेमा बजेट पासपछि नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा छ । त्यसैलाई राष्ट्रिय सरकार बनाउन एमाले ईमान्दारिपुर्वक आयो भने, हामी ईमानदारितापुर्वक प्रयोग हुन्छौँ । आएन भने, त्यसमाथि हामी रिभ्यु गर्छौं ।
नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयमा के सम्झौता भएको थियो ?
नौँ बुँदे सहमति बाहिर आइसकेको छ । त्यसमा पनि कतिपय कार्यान्वयन भएको छैन । हामीलाई धोका दिइएको छ । बजेटमा हामीलाई झुक्याउने काम भएको छ । हामीसँग प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले झुट बोल्नु भएको छ ।
सन्तुलीत विकासको कुरा गर्नुभो तर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले आफनो क्षेत्रमा मात्रै बजेट खन्याउनुभो । यसले हाम्रो पार्टीमा होईन एमालेभित्र पनि असन्तुलन गर्‍यो । अनि तीनबुँदेमा हस्ताक्षर नगरेर समय आउँदा कार्यन्वयन गर्ने गरी जेन्टलमेन्ट एग्रीमेन्ट भएको थियो ।
यद्धपी केही सकारात्मक कुरोहरु बजेटमा आएका छन् । यसका अतिरिक्त जनयुद्ध, जनआन्दोलनमा घाईते भएका, अपाङ्गता भएकाहरुलाई सहयोग बृद्धि गर्ने, सहिद बेपत्ताहरुलाई राहत थप गर्ने भनेर उहाँले प्रतिबद्धता गर्नुभो तर बजेट व्यवस्था गर्नुभएन ।
सन्तुलीत विकासको कुरा गर्नुभो तर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले आफनो क्षेत्रमा मात्रै बजेट खन्याउनुभो । यसले हाम्रो पार्टीमा होईन एमालेभित्र पनि असन्तुलन गर्‍यो । अनि तीनबुँदेमा हस्ताक्षर नगरेर समय आउँदा कार्यन्वयन गर्ने गरी जेन्टलमेन्ट एग्रीमेन्ट भएको थियो । हामीलाई थाहा छ,–जेन्टलमेन्ट एग्रीमेन्ट भनेको समय आएपछि कार्यान्यन हुन्छ । र, जानकारीमा आउँछ । तर, एमाले नेताहरु आफैले यसलाई बाहिर लानुभयो । उहाँहरुले नै होईन भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री स्वयम्ले नै बोल्न जरुरी थिएन । अनि त्यसक्रममा हामी बोलेनौ । ‘होईनक्यारे’ भन्ने एकखालको झुट माहोल बनेपछि हामीले पनि बोल्यौँ । त्यतिबेला बजेट प्रस्तुति र पास भएपछि नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसको नेतृत्व माओवादीले गर्ने, त्यसलाई राष्ट्रिय सरकार बनाउन कोशिस गर्ने, त्यसमा एमाले पनि आउने सहमति भएको थियो ।
एमालेसँग मिलेर छौँ चरणका चुनावहरुमा भाग लिने लगायतका कुरोहरु पनि थिए । त्यसमा एमाले ईमान्दार देखिन्छ कि देखिन्न ? खरो उत्रिन्छ कि उत्रिन्न ? हामी हेर्छौं ।
हिजो कांग्रेस र एमालेकोे सातबुँदे सहमतिको पछाडि कांग्रेसले धोका दियो भन्नेहरुलाई अलि नकारात्मक कुरा भन्दा, हामीले सपोर्ट नगरेको भए त सिंहदरबारमा केपी ओलीजीको फोटो पनि नटाङ्गिने अवस्था भैसकेको थियो । कांग्रेसले त धोका दिइसकेको थियो । तर हामीले उहाँँहरुलाई काँध थापेर त्यहाँ पुर्‍यायौँ । अनि आज हामीलाई नै हेप्ने खालको, होच्याउने खालको, त्यसो त सहन सकिँदैन राजनीतिमा । एकपटकको सम्बन्ध होईन ।
यो हेपाईपूर्ण सम्बन्धकाे संकेत के हो ?
हामी ठूलो पार्टी हुँदा हाम्रो अध्यक्ष नेतृत्वकै सरकारलाई उहाँहरुले गिराएकै हो । बरु माधव नेपाललाई दुइ ठाउँबाट हार्दा पनि हामीले ल्याएका हौं । वामदेवजीले हार्दा पनि हामीले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा सर्पोट गरेकै हो । स्वयंम झलनाथजीलाई पनि सहयोग गरेकै हौँ, जतिबेला हामी पहिलो पार्टी थियौं । अहिले पहिलो पार्टी कांग्रसलाई छाडेर केपीजीलाई सहयोग गरेकै हौँ । हामीले पहिलो पार्टी कांग्रेसलाई पनि सहयोग गर्न सक्थ्यौँ । कांग्रेसलाई सपोर्ट गर्न नहुने केही पनि थिएन । शान्ति प्रक्रियाका लागि त धेरै विषय कांग्रेससँग मिल्थ्यो । मधेसलाई मेनस्ट्रिममा ल्याउन कुरो मिल्थ्यो । १२ बुँदे सहमति कांग्रेससँग गरेको हो । एमाले त सहयोगी मात्रै थियो । धेरै कुराहरु कांग्रेससँग मिल्दा–मिल्दै पनि राष्ट्रियता सवालमा प्रगतिशिल एजेन्डाको सवालमा, सामाजिक रुपान्तरणको सवालमा र अर्कोतिर संविधान निर्माण गर्दा हामी कांग्रेस र एमालेबीचमा नेतृत्वसम्बन्धी सहयोगमा जो सहमति भाएको थियो कांग्रस पछि हटेपछि हामीले ईमान्दारीपूर्वक सहयोग गरेका हौँ । अब एमालेले के गर्छ ? सधै माआवादीले सहयोग गर्ने होकी माओवादीलाई पनि गर्छ ? हेरिराखेका छौँ ।
माओवादी केन्द्रले अब के गर्छ ?
सामान्यतया अहिले पनि छलफलमै छौं । बजेट पास हुनेवित्तिकै हामी यसलाई घनिभूत रुपले तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउँछौँँ । अहिले बजेट पास मुख्य एजेन्डा हो । त्यसपछि मुख्य एजेन्डा सहमतिय सरकार निर्माण हुनेछ ।
वर्तमान सरकार अब कति टिक्छ या औपचारिक तहदेखिको कहिले देखि निर्णय सुरु हुन्छ ?
यसैदिन भनेर कुनै तिथी मिती तोकेर निर्णय जारी गरेका छैनौँ ।
बुँदागत रुपमा भन्दिनुहोस् एमालेले तपाईंहरुलाई कसरी धोका दियो ?
यो विषयमा अलग चर्चा गरौँला । खासमा बजेट प्रस्तुतीमा गठबन्धनलाई उपेक्षा गरियो । बजेटमा प्रादेशिक सन्तुलन र त्यसैगरि क्षेत्रीय सन्तुलन भएन । बजेटमा शहिद बेपत्ता परिवारदेखि घाईते अपाङ्गता भएकालाई राहत दिइएन । राजनीतिक, संवैधानिक नियुक्तीहरुमा योग्य मान्छेहरुलाई पाखा लगाइयो । यसमा गठबन्धनका भाव भन्दा सबैमा एमालेकरण गरियो । हाम्रा मन्त्रीहरुका मातहतका मन्त्रालयमा नियुक्ती गर्दा कित एमालेको मान्छे हुनुपर्ने वा ढिलाई गर्दिने वा कामै गर्न नदिने वातावरण बनेको छ ।
हिजो एमाले कांग्रेस नेतृत्वमा सरकारमा हुँदा कमजोरी जति नेतृत्वलाई थोपर्ने, राम्रा कामको जस लिने । आज आफै नेतृत्वमा रहँदा कमजोरी चाहीँ हाम्रा मन्त्री र हाम्रा पार्टी तिर देखाइएको छ । यस्तो चलाखीले राजनीति चल्दैन ।
यसमा माओवादी मन्त्रीका कमजोरी पनि छन् नी ?
मान्छेहरुमा कमजोरी हुन्छन् । सिमा हुन्छ । तर सिमा कुन हदसम्मको छ ? भन्ने हो । मन्त्रीबाट निकाल्ने, फिर्ता बोलाउने, मन्त्री चलाउन नसक्ने हदसम्म छ छ भने मात्रै हो ।
आफ्नै मन्त्रीको समिक्षा गर्नुपर्दा कसरी गर्नुहुन्छ ?
त्यो हामी अलग गर्छौं । यो सरकारमा नौ महिना बस्यौं । मन्त्रीहरुको समिक्षा पार्टीले गर्ला । जनताले पनि गर्नुपर्छ । मन्त्री भन्ने पद पार्टीको मात्र होईन देशकै हो ।
जनताकै नजरबाट हेर्दा माओवादी मन्त्रीहरुले केही गरे जस्तो देखिँदैन त ?
माओवादीले त्यही कुरो गर्दा आलोचना गर्छन् एमालेका मन्त्रीले त्यो गर्दा गर्दैनन् । किनभने एमालेबाट मान्छेले आस नगर्ने माओवादीबाट आस गरेका हुन्छन् । तर माआवादीको मन्त्रीले जनताको काम नगर्दा मान्छेहरुले निराश हुन्छन् । किनभने, माओवादीबाट अपेक्षा धेरै छ तर, काम एभरेज हुँदा मान्छेहरु निराश हुन्छन् ।
कमरेड प्रचण्डको एकलाखको पलङको चर्चा भयो । दिवंगत सुशील कोईराला प्रधानमन्त्री हुँदा करोडौको फर्निसिङ भयो यो कुरा बालुवाटारमा सबैलाई थाहा छ । तर, कसैले चर्चासम्म गरेन । त्यस्तै अहिले केपि ओली प्रधानमन्धत्री भैसक्दा धेरै चिजहरु परिवर्तन भएको छ । किनकी, कांग्रेस प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले गर्छन, गर्दैआएका छन् भनेर मान्छेले स्वभाविक मान्छन् । प्रचण्डले गर्नहुन्थेन यो कोणबाट कुरा उठ्नु स्वभाविक हो ।
हामी माओवादीहरुले आफैलाई जनताको अपेक्षासँग जोड्ने हो । हामी कांग्रेस मन्त्रीजस्तो, एमाले मन्त्री जस्तो होइनौ है । एभरेजमा नयाँपनले हेर्नुपर्छ ।
नयाँपन भन्दैगर्दा माओवादीमा ‘दाग’ लागेको त हो नी ?
एकतापछि बनेको माओवादी सांगठीक संरचना हेर्दा, उल्टो पिरामिड जस्तो देखिन्छ । माथि भद्दा तलतिरको संगठन कमजोर जस्तो लाग्दैन तपाईंलाई ?
यो आयोजक कमिटी हो । दशवटा पार्टी घटकहरु वा नेतृत्वको एकता हो । जो जहाँ थियो यसलाई मिलाउँदा यस्तो भएको हो । १० घटकको २–२ सय केन्द्रिय समितीमा ल्याउँदा पनि २००० पुग्छ । यसलाई अन्यथा मानेका छैनौँ । डेढ सयदेखि दुईसय सम्म सबैका थिए । यो सिंगो पार्टी बनेपछि डेढ दुईसयमा आउँछ । (हाँसो…) ।
दाग सापेक्षित हुन्छ । जनयुद्धकालमा पनि सेतोमात्रै थिएन । भित्रका कमीहरु थिए । नगर्नु भनेको काम गरिन्थ्यो । गर्नु भनेको काम गरिँदैनथ्यो । पार्टीगत नीति नाघिन्थ्यो । विभिन्न क्षेत्रहरुमा त्यस्तै प्रकारको दाग हुन्थ्योहोला । आज अर्को कोर्सको प्रयोगमा छौँँ । राजनीतिमा नयाँ ठाउँमा छौँँ । यसका पनि नयाँ सिमाहरु छन् । किनभने, माओवादी पनि मान्छे हो । यही समाजकै उत्पादन हो । फरक ढंगले सोच्ने, आमुल परिवर्तनबाट सोच्ने, तीब्र गतिबाट समाजको रुपान्तरण गर्ने सोच्ने माओवादी हो । सामान्य समाज आफैँ पनि रुपान्तरण हुन्छ । समाजकै गतिसँगै हिड्ने यथास्थितीवादी हो । अलिकति छिटो गर्ने प्रगतिशिल, अलि तिव्र गर्ने क्रान्तिकारी हो । ठीकै गरौं भन्दा दाग जस्तो देखिन्छ ।
जनताले नै बुझेको हुन्छ । शतप्रतिशत शुद्ध कोही पनि हुँदैन, शत प्रतिशत क्रान्तिकारी भैराख्ने हुँदैन ।
यसलाई पौष २३ गतेदेखि हुने महाधिवेशनमा हाम्रै नेतृत्वमा १९९ लिएर आउछौँँ ।
हामी सम्मेलनहरु मर्फत हामी समिति बनाउँछौँ । सबै कमिटी निर्वाचित हुन्छन् । सधै यस्तो बनायो भने त गाईजात्रा हुन्छ, पार्टी नै रहेन नी । अहिले चाहीँे विशिष्ट अवस्था हो ।
अबको माओवादीको सांगठनीक संरचना कस्तो हुन्छ ?
जन पार्टी नै हो तर जनआधारित कार्यकर्ता पार्टी हुन्छन् । एउटा सानो हिस्साका कार्यकर्ताहरु चाहीँ प्रोफेस्नल संगठनलाई पुरै समय दिने हुन्छन् । पुरै हिस्सा पार्टी सदस्य उत्पादनमा जोडिने । उत्पादन र सामाजिक, राजनीतिक आन्दोलनमा जोडिएका कार्यकर्ता ठूलो पंक्ति रहन्छ । एउटा सानो पंक्ति पुर्णकालीन रहन्छ । जनआधारित पार्टी रहन्छ । त्यो लेनिनले भने जस्तो पनि हुँदैन । माओले भने जस्तो पनि हुँदैन । जनयुद्ध बनाएको जस्तो मात्रै हुँदैन । अब अहिलेको प्रतिस्पर्धामा जित्न सक्ने भोटमा पनि जित्ने पार्टी त्यसै क्रान्तिलाई पनि निरन्तरता गर्न सक्ने पार्टी हुन्छ ।
माओवादी संगठन निर्माणको लागि प्रतिबेदन पेस गर्नुभएको प्रतिवेदनको विषयमा के हुँदैछ ? केन्द्रीय कार्यालयले स्विकार गरेको छ । पोलीटब्युरोले सैद्धान्तीक रुपमा स्विकार गरेको छ । भदौमा आयोजना हुने केन्द्रिय आयोजक समितीमा प्रस्तुत गर्छौं । त्यहाँबाट आवश्यक परिमार्जनपछि पास भएपछि लागु गर्छौं ।
योगेन्द्र घिसिङ माओवादी केन्द्रका सांसद हुन् । तत्कालीन डा. बाबुराम भट्टराई सभापति रहेको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा रहँदा ...